सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि विद्यालयहरुको अनुगमन सुरु गरेको: देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री (भिडियो सहित) - Nepal’s First News Agency
काठमाडौं, मंसिर १५ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय अनुगमनको काम सुरु गर्नु भएको छ । मन्त्री पौडेलले बुधबार काठमाडौंको जमलस्थित दरबार हाई स्कुलको अनुगमन गर्नु भएको हो । अनुगमनको क्रममा उहाँले कक्षा कोठामा भईरहेको शिक्षण सिकाईका बारेमा शिक्षक र विद्यार्थीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नु भयो । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि आफूले ती विद्यालयहरुको अनुगमनको काम सुरु गरेको जानकारी दिनु भयो । उहाँले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीचको बलियो सहकार्यका लागि पनि विशेष ध्यान दिएको बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा सुधार ल्याउन कडा मिहिनेत गर्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सार्वजनिक शिक्षालाई अलि तीव्र गतिमा सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाई र शिक्षण सिकाईसँग सम्बन्धित आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन गरेर अघि बढने गरी हामी हामी अगाडि बढछौं । र हामीले शिक्षण प्रक्रियासँग सम्बन्धित कतिपय कमीकमजोरलाई सच्याएर त्यसको तुरुन्त अनुगमन गर्ने, शिक्षण सिकाईसँग सम्बन्धित प्रविधिहरु छ कि छैन ? सिकाईको प्रक्रिया के छ ? शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको तादम्यता मिल्दोजुल्दो छ कि छैन ? यी कुराहरुलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन हामीले ध्यान दिएका छौं ।’